သတင်း – Page3– Shwemyanmar
DKBAခွဲထွက်အဖွဲ့ သို့မှာတမ်း ————————————— ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူ ပြောသလိုပါပဲ ကျနော်တို့ ဟာ လမ်းလျှောက်တတ် မလျှောက်တတ်စအရွယ်ရောက်ပြီး အချိုနဲ့ အခါးကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်နေပါပြီး BGF စစ်သည် အားလုံးဟာ တစ်ချိန်က ကျနော်တို့ အဖွဲ့ တွေအပေါ် အမြင်မကြည်ခဲ့တာတွေ မယုံကြည်ခဲ့တဲ့သူတွေ ယုံကြည်ဖို့ကြိုးစားနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ် ဒါကြောင့်လဲ ပြည်သူလူထုရဲ့ အားပေးထောက်ခံမှု ယုံကြည်ကိုးစားမှုအချို့ ကိုရခဲ့ပါတယ် မျက်ကန်းမျိုးချစ်အချို့ ကလွဲပြီးတော့ပေါ့ တစ်ချိန်က ကျောသားရင်သားခွဲခြားခဲ့လို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကိုမသိပဲ ကရင်ပြည်နယ်ကြီးဆင်းရဲခဲ့တယ် အခုချိန်မှာတော့ ကရင့်လက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံး ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ လက်တွဲကြိုးစားနေကြပါတယ် လက်တွဲလို့ မရတဲ့ ခွဲထွက်အဖွဲ့ ကိုတော့ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ လက်တွဲဖြုတ်ပြီး ထိုက်သင့်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးကြရမှာပါပဲ ကရင်အချင်းချင်းပြန်လည်ပူးပေါင်းကြမယ်ဆိုပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လက်မတွဲပဲ ကိုယ်ကျိုးအတွက်သာ ရှဖွေစားသောက် စစ်မီးမွှေးနေတာကိုတော့ ကရင့်လက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်အားလုံးက လက်သင့်ခံမယ်မထင်ပါဘူး နောက်ဆုံးအနေနဲ […]
လိုင်​ဇာကို လက်​နက်​ကြီးဖြင့်​ ပစ်​ခတ်​ပြီး KIA သူပုန်​အဖွဲ့အား အပြင်းထန်​ဆုံး သတိ​ပေး ==================================== ယခုရက်​ပိုင်း အကြမ်းဖက်​လုပ်​ရပ်​များ ​ဆက်​တိုက်​ကျူးလွန်​ ​နေသည့်​ KIA သူပုန်​အဖွဲ့၏ လုပ်​ရပ်​များအား သတိ​ပေးသည့်​ အ​နေဖြင့်​ ယ​နေ့ ဒီဇင်​ဘာ ၁၅ ရက်​ နံနက်​ပိုင်း ခရာဘွမ်​တွင်​ တပ်​စွဲထား​သော အ​မြောက်စခန်းမှ လိုင်​ဇာမြို့တွင်းသို့ ၁၀၅ မမ ဖြင့်​ ၄ ကြိမ်​ပစ်​ခတ်​ပြီး အပြင်းထန်​ဆုံး သတိ​ပေးလိုက်​​ကြောင်း သိရ။ သ​ဘောက​တော့ လိုင်​ဇာကို ဘယ်​အချိန်​တိုက်​တိုက်​ ရတယ်​လို့ သတိ​ပေးလိုက်​ တာ။ ဒါကို KIA သူပုန်​အဖွဲ့အ​နေနဲ့ဆက်​ပြီး မခန့်​​လေးစားလုပ်​​ ​နေရင်​ လိုင်​ဇာလည်း မကြာခင်​​ ပြာပုံဘဝ ​ရောက်​ဖို့ ကြိမ်း​သေ ​နေပြီ။ – – – Htet […]
လူနာကမ​သေဘဲ လူနာ​စောင့်​များ အ​အေးပါတ်​​သေမည့်​ အ​ခြေအ​နေ။ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ကျန်းမာ​ရေး ဂဏ္ဍအရှိန်​အဟုန်​ဖြင့်​ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်​လာပါပြီဆို​သောနိုင်​ငံ​တော်​သစ်​က ​ခေါင်း​ဆောင်​ကြီးများ မြင်​သိကြပါ​စေ။ ယခုမြင်​​တွေ့ရတာက​တော့ သံလျှင်​​ဆေးရုံမှ လူနာ​စောင့်​များ အိပ်​​နေကြတဲ့အ​ခြေအ​နေမြင်​ကွင်းပါ။ မြန်​မာပြည်​ တစ်​၀ှမ်းက အစိုးရ ​ဆေးရုံကြီး​တွေမှ အထူးခန်းမတတ်​နှိုင်​​သော ဆင်းရဲသားပြည်​သူများ၏ ကျန်းမာ​ရေးအတွက်​ ပင်​ပမ်းကြီးစွာကုသမူခံယူ​နေရ​သောမြင်​ကွင်းဖြစ်​ပျက်​​နေကြတာ စိတ်​မချမ်း​မြေ့ဖွယ်​ပါ။ အဆိုပါ ဆင်းရဲသားလူနာများနှင့်​ လူနာ​စောင့်​များအတွက်​ တည်းခို အိပ်​​ဆောင်​​လေး​တွေ ​ဆောက်​​ပေးသင့်​ပါသည်​။ အစိုးရ​ဆေးရုံကြီး​တွေမှာ ပညာရှင်​များ တာဝန်​​ကျေ​သော်​လည်း အစိုးရဘက်​က ကျန်းမာ​ရေး ဂဏ္ဍ တိုးတက်​ပါသည်​ဟု အ​ပြောမဟုတ်​ အလုပ်​ဖြင့်​ သက်​​သေပြသင့်​​သော အချိန်​ ​ရောက်​​နေပါပြီ။ ​မေတ္တာဖြင့်​…….. […]
အင်းဝ အပ်ချုပ်ဆိုင်မှ တရားခံ လေးဦးအား နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်လိုက်ပြီး နှစ်ဦးမှာ အပြီးသတ် လွတ်မြောက် ———————————– အင်းဝ အပ်ချုပ်ဆိုင်အမှုကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး၌ အမိန့်ချခဲ့ရာ အင်းဝ အပ်ချုပ်ဆိုင် ပိုင်ရှင် ဒေါ်တင်သူဇာ အပါအ၀င် တရားခံ လေးဦးအား ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခဲ့ပြီး မသီရိလတ်နှင့် ဦးကိုလတ်တို့နှစ်ဦးမှာ အပြီးသတ် လွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အင်းဝ အပ်ချုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဒေါ်တင်သူဇာအား ထောင်ဒဏ် ၁၇ နှစ် ၁ လ ၊ မစုမွန်လတ်အား ၁၇ နှစ် ၁ လ၊ ကိုရာဇာထွန်းအား ၁၄ နှစ်၊ ၁ လ နှင့် ကိုတင်မင်းလတ်အား ၁၄ […]
KIA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများ ထောင်ထားသည့် မိုင်းများ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဒေသခံ ပြည်သူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီး မော်တော်ယာဉ်များ ထိခိုက်ပျက်စီး ကချင်ပြည်နယ်၊ ကာမိုင်းမြို့နယ်၊ နန့်ယား ကျေးရွာအုပ်စု၊ အုံဂထောင် ကျေးရွာအနီး ကာမိုင်း-ဖားကန့်သွား ကားလမ်းပေါ်ရှိ မိုင်တိုင်အမှတ်(၂၁)နှင့် (၂၂)ကြား၌ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီ မိနစ် ၄ဝ ခန့်တွင် KIA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများ ထောင်ထားသည့် မိုင်းနှစ်လုံးအား ခရီးသွား ယာဉ်များမှ နင်းမိသဖြင့် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါ မိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဖြစ်စဉ်နေရာအနီး ကားလမ်းဘေး လယ်စောင့်တဲရှိ ဦးအင်တောလှ(ဘ) ဦးအင်စောလှသည် မိုင်းစထိမှန် ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ပြီး ဦးလထော်တန်စိုင်း (ဘ)ဦးဘရန်စိုင်း မောင်းနှင်လာသည့် ပရာဒို အမျိုးအစား […]
ကချင်ဒေသ တိုက်ပွဲ ရလဒ် ( Update News!) ================================ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့က KIA စခန်းကုန်း ၄ နေရာကို မြန်မာ့တပ်မတော်မှ စတင်သတိပေး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့… တနိုင်းနဲ့ မံစီဘက်ခြမ်းမှာ တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်ခဲ့သလို လိုင်ဇာဌာနချုပ် ကို ကာကွယ်နေတဲ့ ပုံလင်းအမည်ရှိ KIA ရင်း ၂၅၅ ရဲ့ ရှေ့ကာကင်းစခန်းကို မြန်မာ့တပ်မတော်မှ တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့… KIA သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့ဟာ အကျအဆုံးများစွာနဲ့ စခန်းကို စွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့… တိုက်ပွဲအပြီး KIA ရင်း ၂၅၅ ရဲ့ ရှေ့ကာကင်းစခန်းတစ်ခု ကို မြန်မာ့တပ်မတော်က ရရှိခဲ့ပြီး လက်နက်ခဲယမ်းအချို့၊ ရိက္ခာပစ္စည်းအချို့နဲ့ KIA ယူနီဖောင်းဝတ် အလောင်း ၅ လောင်းနဲ့ KIA ယူနီဖောင်း […]
ပျောက်ဆုံးစိန်ဖူးတော်ပြန်မတွေ့သေးပဲနဲ့ စိန်ဖူးတော်အသစ် အစားထိုးလှူဖြစ်ရတဲ့အကြောင်း သိချင်သူများဖတ်ပေးကြပါ။ ————————– အခုတလော သတိထားမိတာက ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ စိန်ဖူးတော်နဲ့ ခိုးတဲ့တရားခံကိုမမိသေးပဲနဲ့ စိန်ဖူးတော် အသစ်ပြန်လှူ ဖို့စီစဉ်နေတာကို မြို့ခံအချို့က သိပ်ပြီးလက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိတာကိုမြင်တွေ့နေရလို့၊စိန်ဖူးတော်အသစ်ပြန်လှူဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းလေးကို ကျွန်တော်သိသလောက်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့စိန်ဖူးတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တောင်ငူတစ်မြို့လုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။ ပျောက်ဆုံးပုံကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကိုး၊ ဂေါပကဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်း စိန်ဖူးတော်ကို သင်္ကန်းနဲ့အုပ်ပြီးသယ်ကြတာလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပဲ၊ စိန်ဖူးတော် ပျောက်တာသိရတာကလည်း ရွှေဆံတော်ဘုရားပေါ်ရောက်ပြီးရက်ပေါင်း ၁၄ ရက်ကြာမှ သိလိုက်ရတာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပဲ၊ ပျောက်သွားတဲ့စိန်ဖူးတော်နဲ့အခြား ရတနာအားလုံးရဲ့တန်ကြေးကလည်း ယနေ့ကာလတန်ကြေးနဲ့ဆိုရင်ကျပ်သိန်းပေါင်း သောင်းဂဏန်းကျော်တယ်ဆိုတော့လည်းစိတ်ဝင်စားစရာပဲ၊ စိန်ဖူးတော်နှင့်ရတနာတွေပျောက်တယ်လို့တောင်ငူမြို့ က ပြည်သူတွေ၊ သိလိုက်ရတာက နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက် နေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုပျောက်ပြီး ၄ ရက် ၅ ရက်လောက်ကြာတော့ စိန်ဖူးတော်နဲ့ငှက်မြတ်နားတော်ကို သူဌေးကြီးတစ်ဦးကအစားထိုးပြီး အသစ်ပြန်လှူဖို့ဆိုပြီး တော့ တမ္မ၀တီဦးဝင်းမောင်နဲ့အဖွဲ့က ရွှေဆံတော်ဘုရားပေါ်က […]
မလေးရှားအစိုးရ ကြေညာချက် ထုတ်လိုက်ပြီ ======================== မြန်မာအပါအဝင် တရားမဝင်နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများအနေနှင့် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် နောက်ဆုံးထားထွက်ခွာရန် မလေးရှားအစိုးရမှ ကြေညာလိုက်သည်။ အဆိုပါ ကြေညာချက်ကို မလေးရှားအစိုးရက ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တရားမဝင်နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများအနေဖြင့် ၎င်းနိုင်ငံအတွင်းမှ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် နောက်ဆုံးထားထွက်ခွာရန်နှင့် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် မှစ၍ တရားမဝင်လုပ်သားဖမ်းဆီးမှု စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်ဟု မလေးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက် ကပုန်းလူမှုကူညီရေးအသင်းမှ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်က သိရသည်။”၃၁ ရက် နောက်ဆုံးပဲ။ဖမ်းမယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပါပြီ။ ဖမ်းတာကတော့ အခုရက်ပိုင်းကစပြီး KL မှာဆို ခပ်ကျဲကျဲတော့ ဖမ်းနေတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ကဆိုဂျိုးဟိုမှာ ဝင်ဖမ်းတာ ၁ဝဝ ကျော်ပါသွားတယ်။ အများစုက မြန်မာ တွေချည်းပဲ။ […]
သက်ဆိုင်ရာလူကြီးများဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါတယ်. ##################### တရုတ်သတင်းစာ မှာလည်း ပါလာတဲ့ အတွက် နိုင်ငံပုံရိပ် အင်မတန်မှကျဆင်းပါတယ်. ကလေးငယ်များကိုပါတောင်းရမ်းဖို့ခိုင်းစေတဲ့အတွက် ဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါတယ်. တရုတ်လူမျိုးခရီးသွားများဆီကနေမူဆယ်နယ်စပ်ဂိတ်အလယ်ပေါက်ခြံစည်းရိုးတစ်ဖက်ကနေ ပိုက်ဆံတောင်းခြင်း ( ခြေထောက်ဖက်ရှိခိုး၍တောင်းရမ်းခြင်းများပြုလုပ်ကြပါသည် ) တရုတ်ပြည်အတွင်းဘက်ခြမ်းဝင်၍လည်း (အလယ်ပေါက်မှာပဲ ) ပိုက်ဆံ လိုက်လံတောင်းခံခြင်းများ ပြုလုပ်နေတာ ကြာပါပြီ။ တရုတ်ခရီးသွားများက အထူးဆန်းသဖွယ် ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်း အင်တာနက် တင်ခြင်းများပြုလုပ်နေ သည်မှာလည်း ကြာပါပြီ မြင်နေရက် သိနေရက် ကြားနေရက်နှင့် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်သူ ဥပဒေ အရ အရေးယူပေးမည့်သူ ကလေးငယ်များအားကာကွယ်ပေးမည့်သူမရှိပါ. အရပ်ဘက် လူမှုရေး အဖွဲ့စည်းများမှ တားမြစ်လျှင် ဝိုင်းဝန်း ဆဲဆို ရန်ပြုကြပါတယ်. (ကလေးများအားမခိုင်းစေရန် တားမြစ်ခဲ့ဖူးပါသည် ) တောင်းရမ်းနေသူ အမျိုးသမီး များမှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်သောအရွယ်ကောင်းများဖြစ်သည့်အပြင်ကလေးငယ်များကိုပါ တောင်းရမ်းဖို့ ခိုင်းစေပါတယ်. […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on သက်ဆိုင်ရာလူကြီးများဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါတယ်.